Hasi'ratto geeshshi batinye horonsi'raanchu-tiramino mashalaqqeshaano kalaqa dandaantto
Horonsi'raanchu-Tiramino mashalaqqishaancho kalaqate
Qaale woy horonsi'raanchu firamino mashalaqqishaanchira leda hasir atto qaalla fili.
Eessi - Lekkaallidi xawishshubanna shaubba-Biblograafete Eo doori.
Mashalaqishaanchu saaxinera aane noo Haaroo Horonsi'raanchu – Tiramino mashalaqqishaancho kisi.
Haaroo mashalaqqishaanchora filloonni qaalla ledate Eess Kisi.
Horonsi'raanchu-woyyeesso mashalaqqishaancho Eessate
Mashalaqqishaancho eessa hasi'rattowa bortoje kisi.
Title is: Madhalaqqishaancho horonsi'raanchu-Tiramino